दाद, जण्डिस देखि लिएर अन्य थुप्रै राेगहरु चट पार्ने हर्रोका औषधीय गुणहरु यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
कतिपयलाई के भ्रम छ भने पानी झै रंगहिन पिसाब हुनु राम्रो कुरा हो तर यो गलत हो । किनकि, भनाई नै छ अतिले खति गर्छ । पिसाब सामान्य अवस्थामा पिसाब जस्तै हुनु पर्छ । एकदमै बढि पानी पिउँदा किड्नीले रगत छान्न पाउँदैन र रगत शुद्ध हुन समस्या हुन्छ ।
यस्तो रंगिन पिसाब आउँनु दुर्लभ अनुवांशिक समस्या पनि हुन सक्छ । आफ्नो परिवारमा अरु कसैलाई यस्तो भएको थियो कि थिएन भनेर सोधिखोजी गर्नुहोस् । कुनै व्याक्टेरियल इन्फेक्सन वा औषधीका कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ । जुन अवस्थामापनि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
पिसाब लागिरहन्छ ? यस्ता छन् केहि घरेलु उपचार
मानिसलाई छिट्टो छिट्टो पिशाव आउनु पनि कुनै न कुनै रोगको संकेत हो । पानी प्रसस्त खादा पनि पिसाव आउछ तर तेस्ले केहि असर गरदैन । मधुमेहको संकेत हुदा पनि पिसाव छिट्टो छिट्टो आउने गर्दछ ।
यसका साथसाथै केही घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने पनि समस्याबाट मुक्ति पाउनुुहुन्छ ।
एक चम्चा महका साथ तीनचारवटा तुलसीका पात मिसाएर खाली पेटमा खानुभयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।
Don't Miss it हिन्दू धर्मशास्त्र अनसार ननुहाइकन खाना खानु हुँदैन भन्ने मात्र होइन यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ
Up Next टमाटर प्रयोग गर्नुका केहि फाइदा र बेफाइदाहरू यस प्रकार छन्
दीर्घरोगीका लागि आयुर्वेदिक उपचार प्रभावकारी बन्दै
नसर्ने तथा कडा रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आयुर्वेद उपचार क्लिनिकले गाउँ–गाउँमा सञ्चालन गरेको आयुर्वेदिक उपचार प्रभावकारी बन्दै गएको छ…
युरिक एसिड बढ्यो ? युरिक एसिड बढेकाले के खाने, के नखाने ? यस्ता सजिला कम गर्ने उपाय
यूरिक एसिड रगतमा पाईने एउटा महत्वपूर्ण पदार्थ हो । तर जुनसुकै कारणले भए पनि युरिक एसिडको स्तर सामान्य अवस्थाको भन्दा…
थाइराइड के हो, कसरी बच्ने ? यस्ता हुन्छन लक्षणहरु, पढेपछि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, संसारभर १९ करोडभन्दा धेरै मानिस आयोडिन कमीका कारण पीडित छन् । नेपालमा पनि धेरै थाइराइड पीडित…
जाडो मौसममा मुटुका विरामीले ध्यान दिनु पर्ने यी कुरा
उच्चरक्तचापलाई निगरानी गरौँ – उच्चरक्तचापका विरामीहरु चिसो मौसममा थप सर्तक हुनुपर्छ । चिसो मौसममा स्वभावैले रक्तचाप बढ्ने हुनाले हृदयघातको खतरा…